Mutongi wenyika yose - Rabbi Michael Avraham
Mutongi wenyika yose
Responsa > Category: Tsika > Mutongi wenyika yose
Offer Yakabvunzwa makore matatu apfuura
Rabhi anonzwisisa sei mubvunzo waAbrahama wokuti ‘mutongi wenyika yose haangaiti zvakarurama’? Hunhu hunosunga pasina dumbu here? Uye kana zvisina kudaro, kana tsika dziri chinhu chinosungirwa bedzi kutevera kuda kwaMwari, uye pasina musengwa wetsika usina revo, Mwari anogona sei ‘kubvunzwa’ pamusoro pokushaiwa kwake kuzviisa pasi petsika?
mikyab Vashandi Akapindura 3 years ago
Dambudziko nderei? Kunyangwe kana hunhu huchingosungirira pasimba raMwari chete, Abrahama anomubvunza nezvekusaenderana.
Mutongi wekupedzisira Akapindura makore 3 apfuura
Abrahama haazivi kuti ari kutaura naMwari.
Anonzwisisa kuti ari kutaura nemunhu ane mano uye auya kuzotonga. Saka anoedza kunyengedza nekubata kumeso nekubatanidza kuona kuti chiito chakakodzera chii.
David Siegel Akapindura makore 3 apfuura
Zvinorevei kusaziva kuti ari kutaura naMwari?
Uye pano pane vanhu vatatu vakamira pairi, mumwe wavo aiva H. uye akanga asingazvizivi muchiitiko chacho chose
Torah inotitaurira kuti ndiJehovha uye kutaura kwake kwemukati asi Abrahama haana kuziva.
Saka zvingave here kuti Mwari vakaiswa muna Jesu ??
Ukawana nyoka dzinonyengerera vanhu nembongoro dzinotaura zvese zvinogona kuitika.
Kudzidza mune Ultra-Orthodox yeshiva
Tiri mumamiriro ezvinhu akadaro zvechokwadi here?
Uye zvino achava JG On Mhinduro kusarudzo
Beit Joseph Lehava On VaRehavha isangano rerusaruraganda here? (chikamu 484)
Zvine musoro On VaRehavha isangano rerusaruraganda here? (chikamu 484)
kunakirwa On Mhinduro kusarudzo